ည Archives - Myitter
မုံရွာမြို့တွင် ညအချိန်မတော် တွေ့ဆုံကြသည့် စုံတွဲများအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပညာပေး ….
February 24, 2020 Myitter 0
မုံရွာမြို့တွင် ညအချိန်မတော် တွေ့ဆုံကြသည့် စုံတွဲများအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပညာပေး ဟောပြော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကန်သာယာဝန်းကျင် နေရာများတွင် ညအချိန်မတော် တွေ့ဆုံ နေကြသည့် စုံတွဲများအား မုံရွာမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လိုက်လံ၍ အသိပညာပေး ဟောပြောလျက်ရှိကြောင်း မုံရွာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး သောင်းညွှန့်ထံမှ သိရသည်။ […]
(2) မိနစ်အတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် နည်းလမ်း
February 23, 2020 Myitter 0
(2) မိနစ်အတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် နည်းလမ်း ညဘက်မှာ အိပ်မပျော်ခြင်းက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လူအများစုက အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် ဆေးတွေ သောက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ အိပ်ဆေးတွေ သောက်တာကလည်း မကောင်းပါဘူး။ ခြေထောက်ကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းကလည်း လျင်လျင်မြန်မြန် အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ အဆင့် ၁ ပထမဆုံးအနေနဲ့ […]
” မနေ့ညက တရုတ်တွေရဲ့ တစ်မြို့လုံး အိမ်တွေထဲကေန တစ်ပြိုင်နက် ဟစ်ကြွေးသံ ”
ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသား အယောက်(၆၀)ကျော်အတွက်လည်း စိတ်ပူတယ်။ ဝူဟန်က လူတွေအားလုံးအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ ဘယ်လောက် ကြောက်ရွံ့နေရှာမလဲ။ သူတို့ ဘယ်လောက် အားငယ်နေရှာမလဲ။ သူတို့ ဘယ်လို အားတင်းနေကြရမလဲ။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးက ဝူဟန်မြို့ တိုက်ခန်းတွေထဲကနေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အားပေးကြတဲ့ အနေနဲ့ “Wuhan… Fighting…Wuhan… […]
ခွေးဟောင်သံတွေ ကြားရတော့မယ် အခုဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာတွေ့ တော့ ဇာတ်တော်ထဲကဝတ္တုတွေ သတိယမိတယ်…. သီဟိုဠ်မှာကပ်ဆိုက်တဲ့အခါ တောအုပ်ကြီးရဲ့ တဘက်စီမှာ ရဟန္တာပေါင်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင်စီ နေထိုင်ကြတယ် …. ကပ်ဆိုက်တော့လူတွေအစာရေစာရှားပါးပြီး ရဟန်းတော်တွေဆွမ်းကွမ်းမပြည့်စုံကြဘူး ….. ဒါနဲ့ လူသားတွေက ငါတို့ သာအငတ်ခံမယ် သံဃာတော်တွေ မငတ်အောင်ဆိုပြီး […]
”ညည အိပ်လို့ မရအောင် ချောင်းဆိုးနေရင် ”ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ”…….
December 22, 2019 Myitter 0
(၁) မအိပ်ခင် ရေနွေးကြမ်း ပူပူလေးထဲ ပျားရည် ထည့်သောက်ပါ ။ ပျားရည်ကတော့ အရောင်အရမ်း လျော့ကျစေကာ ချွဲသလိပ်တွေ ကြေ စေပါတယ်။ ဘာမှမရှိရင်တောင် ရေနွေး ပူပူလေးထဲကို ဆားခတ်ပြီး ပလုတ် ကျင်းပေးပါက အရောင်အရမ်းကျစေလို့ အသက်ရှူ လမ်းတစ်လျှောက် ချွဲတွေ ဖြိုခွဲပစ် နိုင်ပါတယ်။ […]